Chrome OS 76 inosvika nemitsva multimedia inodzora | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino, Google ine Chrome OS 76 yakaburitswa, yazvino vhezheni yeLinux-yakavakirwa desktop desktop system iyo, zvakapusa uye zviri pamutemo, inogona chete kushandiswa pane ako Chromebook. Iyo nyowani vhezheni yasvika neChannel 76 uye yaita saizvozvo nezvimwe zvinonakidza maficha, senge nyowani multimedia zvinodzora kana rutsigiro rweyerima modhi yemapeji ewebhu, zvinozoita kuti mapeji asvike rima otomatiki kana tazvigadzira.
Uyezve, ivo vakawedzera chipikiri chitsva muguva re Flash Player, nekuti izvozvi zvinozvivharira nekutadza mubrowser inosanganisirwa muhurongwa hwekushandisa (iyo yaisagona kunge iri imwe kunze kweChannel). Uye ndeyekuti iyo Flash yagara iri musoro, asi zvakazonyanya kuoneka pakatangwa matekinoroji matsva. Kufanana nemamwe makambani, pakati payo Apple yakamira payakatangisa iPad yayo, Google kubheja zvakanyanya paHTML5, ichikurudzira akasiyana mapeji ewebhu kusiya Flash kuitira kuti kufambisa mambure kukurumidze, kuchengetedzeka uye kunyatsoita basa maererano nesimba rekushandisa zvine chekuita. Izvo zvichiri kukwanisika kuburitsa Flash zvemukati, asi ichafanirwa kumisikidzwa manyore kubva panzira pfupi iyo yatino tsanangura pazasi.
1 Chrome OS 76: chii chitsva mune iyi vhezheni
2 Iye zvino yave kuwanikwa pane yako Chromebook
Chrome OS 76: chii chitsva mune iyi vhezheni
Pakati pezvakakurumbira zvitsva zvinosvika neChannel OS 76 isu tine:
Flash default kukiya. Inogona kumisikidzwa manyore kubva ku chrome: // marongero / zvemukati / flash, kwatinogona kuimisikidza kuti itibvunze kana isu tichida kuita zvirimo.
Yega yekusaina-pane chiitiko pakati pe Chrome OS ne Android.
Iyo yekudzora nzvimbo yakawedzera multimedia kutonga kwekutamba / kumbomira uye kumberi / kudzoreredza. Aya maitirwo akavakirwa pane anowanikwa pane Android.
Chinzvimbo chebhatter shutter, modhi shanduko uye kamera yekutarisa ikozvino iri pamucheto wekurudyi wechiso. Kune iro kuruboshwe divi ivo vakawedzera madhiragi kuratidza, kumisikidza kana kumisa grid uye kuverenga.
Iye zvino kana uchivhura mamwe mapeji muwindo reChannel, iyo teki chiratidzo chinomanikidzwa kusvikira iyo chete favicon (web peji icon) inoonekwa. Kana uchikwira pamusoro petabhu, ichatiratidza iyo pop-up hwindo iyo ichatizivisa isu zviri pasi.
Google yakagadzirisa "musungo" waishandiswa nevashandisi kuti vaone kunyorera zvakabhadharwa zvemukati kuburikidza ne incognito modhi. Kusvika parizvino, vashandisi vakavhura chikamu mune incognito modhi, vakapinda mawebhusaiti aipa zvavo zvemukati kuburikidza nekunyorera uye vakakwanisa kudarika izvo zvinorambidzwa kuona zvese mahara. Izvi hazvichakwanisika kubvira kwekupedzisira kugadzirisa
Kunatsiridzwa muzvirongwa izvo izvo zvino zvinogara zvichiratidza iro rekutara dhirowa
Tsigiro yemamiriro erima emapeji ewebhu, ayo anozoshanduka kuita matoni erima kana isu taita kuti iite uye peji rewebhu riine rima vhezheni.
Sarudzo yekuisa PWA kunyorera paOmnibox yakawedzerwa. Tinogona kudziisa kubva kune nyowani yekuwedzera icon (+) inowanikwa mubrowser. Iyo PWAs (Progresive Web Apps) ichagadzirisa otomatiki.
Tsigiro (yakavanzwa) kuita mamwe mawebhu peji zvinhu zvichinjika.
Iyo ESC kiyi haichaonekwi seiri kuvharwa / kudzimwa pamapeji ewebhu.
Paunenge uchienda kune peji nyowani rewebhu, Chrome icharatidza iyo isina chinhu skrini kuti uone kuti peji iri kurodha, izvo zvinogona kuvhiringidza kana kukanganisa. Mu Chrome OS 76 tiri kuyedza hunhu hutsva hunonzi Paint Kubata uko browser rinomirira kwechinguva kuti titange "kupenda", kunyanya kana peji racho richikurumidza zvakakwana.
Iye zvino yave kuwanikwa pane yako Chromebook
Chrome OS 76 yaive yakaburitswa muna Nyamavhuvhu 12, saka vazhinji vashandisi vechigadzirwa chinowirirana vanofanirwa kunge vatove nacho kuti chiwanikwe seyekuvandudza. Kana iyi isiri yako, shivirira, ichaonekwa chero nguva. Iwe une izvi uye nerumwe ruzivo mu official release katsamba iyo Google yakatumira neMuvhuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chrome OS 76 inosvika iine itsva multimedia kutonga uye ichivharira Flash
Wordpress.com muridzi wekutenga Tumblr kubva kuVerizon